I-NYFW 2020 Iifoto: Ezona zoyilo ziBalaseleyo ezivela kwi-Runways
ANgomnye we 'Big Fours', iVeki yeFashoni yaseNew York ngomcimbi omnye ongalindelekanga wokuba sijonge phambili kwikhalenda yefashoni yonyaka. Lilo elo xesha apho olona phawu lubalaseleyo lubonisa iqoqo lwazo kwaye ngethemba lenza amanye amaza ngoyilo lwalo kunye nokubaleka kokubulala. Imiboniso ye-NYFW FW20 yayingahlukile.
Nokuba ungumthengi okhutheleyo woyilo lwefashoni okanye umntu onwabele nje ukukhangela eziphezulu zabayili abathandayo, i-NYFW FW20 runways yayiye-chock-igcwele imbonakalo eqinisekileyo yokugcwala ipali nganye.
Ukunika incasa yoyilo olwenziweyo oluphilayo ngeli xesha lonyaka, sijikeleze ezinye zeempawu ezintle ezivela kwi-NYFW FW20-ukusuka kwi-chic emangalisayo ukuya kwindalo engalindelekanga, kwakungekho kukushokoxeka kweemvakalelo ezivuselelayo kunye ne-vibes.
Kodwa uyilo aluzange luhambisane, iVeki yeFashoni yaseNew York yenza iinkcazo ngenkalipho kwisebe lezixhobo njengesiqhelo. Ukusuka ngamacici ukuya kwiibhanti zentamo ukuya kwiibhanti, iimodeli ezaziphathwa ngendlela yeendlela ezijijayo zisiwa kumakhonkco, zifihla emva kwezipili zetayile njengoko kucacile ukuba ngeli xesha, ezinkulu zazingcono.
Jonga enye yezona ndlela zintle zokuphuma kwi-NYFW FW20 runways ...
UChristopher John Rogers
NguChristian Cowan UmKristu uSiriano Okufumaneka Michael Kors nyfw I-NYFW AW20 Tadashi shoji Ngomhla wento U-Ulla Johnson